News - လတ်ဆတ်စွာနေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်သုံးခု
လစ္စကီသစ်များကိုဟန်နှင့်တန်မင်းဆက်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုဟန်နှင့်တန်မင်းဆက်ရှိလီချိသမိုင်းကြောင်းမှတ်တမ်းများတွင်လတ်ဆတ်သောလိုင်ချီပို့ဆောင်ခြင်းတွင်သစ်ခုတ်များနှင့်အရွက်များနှင့်အတူစိုစွတ်သော ၀ ါးစက္ကူဖြင့်ပတ်ထားသည့်ဘောလုံးတစ်ချောင်းကိုတင်ထားသည်။ ကြီးမားသောအချင်း (၁၀ စင်တီမီတာကျော်) ၀ ါးထဲသို့သို့ဖယောင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ တောင်နှင့်တောင်အနောက်မှမရပ်မနားပြေးသောမြင်းသည်နေ့ရောညပါပြေး။ လိုင်ချီသည်လတ်ဆတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ lychees များ၏ 800-li သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ကောင်းအစောဆုံးအအေးကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
မင်မင်းဆက် - hilsa herring Delivery
ငါတို့ Ming နှင့် Qing မင်းဆက်တွင်ပေကျင်းရှိမြို့တော်များနှင့်အတူhကရာဇ်များသည် hilsa herring ဟုခေါ်သောငါးမျိုးတစ်မျိုးစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့နောက်ပြproblemနာတစ်ခုမှာငါးများသည်ဘေဂျင်းနှင့်မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာဝေးသော Yangtze မြစ်မှဖြစ်ပြီး Hilsa Herring သည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ သေဆုံးရန်ဖြစ်သည်။ ဘေဂျင်းတွင်shကရာဇ်များသည်အရိပ်သစ်ကိုမည်သို့စားနိုင်မည်နည်း။ အအေးကွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နည်းလမ်းဟောင်းကကူညီပေးသည်!
သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများအရ "ဝက်ဝက်ဆီနှင့်ရေခဲတို့သည်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ " ကြိုတင်၍ ၎င်းတို့သည်စည်ကြီးမားသောရေနံစည်ကြီးကိုပြုတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်အရည်ပျော်မှုမတိုင်မီအအေးခံရသောအခါလတ်ဆတ်သောရနံ့ကိုရေနံစည်သို့ဖမ်းမိသည်။ ဝက်ဆီအဆီပိုမိုခိုင်မာလာသောအခါ၎င်းသည်ငါးများကိုလေဟာနယ်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တူသောပြင်ပစကားလုံးမှတားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပေကျင်းသို့နေ့ရောညပါလျင်မြန်စွာစီး။ ရောက်သောအခါငါးသည်လတ်ဆတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
3. မင်း Qing မင်းဆက် - စည်စိုက်ခင်း Lichee
ဒဏ္ာရီတွင်ongကရာဇ် Yongzheng သည် litchi ကိုလည်းချစ်သည်။ favorကရာဇ်မင်း၏မျက်နှာသာရရန် Fujian နှင့် Zhejiang ပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Man Bao သည်ဒေသဆိုင်ရာအထူးများကို Yongzheng သို့မကြာခဏပို့ခဲ့သည်။ litchi ကိုလတ်ဆတ်စွာနေစေရန်သူသည်လိမ္မာပါးနပ်သောအကြံအစည်ဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Manbao ကLကရာဇ် Yongzheng သို့စာတစ်စောင်ရေးခဲ့သည် -“ Litchi ကို Fujian ပြည်နယ်မှာထုတ်လုပ်တယ်။ သစ်ပင်ငယ်လေးအချို့ကိုစည်မှာစိုက်ထားတယ်။ လူများစွာဟာ litchi ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာထားကြပေမယ့်အရသာကတော့သစ်ပင်ကြီးတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ litchi နဲ့မတူဘူး။ သစ်ပင်ငယ်များသည်ဘေဂျင်းသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့်တာဝန်ရှိသူများမှာမူအလွန်ပင်ကြိုးစားရန်မလိုပါ။ ...ပြီလတွင်စည်စိုက်သည့် litchi သစ်ပင်များကိုပေကျင်းသို့ချက်ချင်းတင်ပို့လိမ့်မည်။ - Aprilပြီလနှင့်မေလအတွင်းခရီးသွားများသည်lပြီလနှင့်မေလခရီးများ၊
၎င်းသည်တောက်ပသောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီအစားကိုယ့် lychees ပေးခြင်း၏သူပြီးသား lychees ထုတ်လုပ်ခဲ့ကွောငျးတစ်စည်၌စိုက်သောအပင်တစ်ပင်ကိုစေလွှတ်။ ,
ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်မှုနှင့် e-business ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်နှင့်အတူအအေးခန်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေသည်။ ယခုတရုတ်နိုင်ငံသို့နှစ်ရက်အတွင်းလတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ပင်လယ်စာများကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။